Ndị Izrel ga-ebirighachi n’ala ha (1, 2)
A ga-ama eze Babịlọn njakịrị (3-23)
Onye na-enwu ka kpakpando ga-esi n’eluigwe daa (12)
Jehova ga-eji aka ya bibie onye Asiria (24-27)
Ihe Chineke kpebiri ime ndị Filistia (28-32)
14 Jehova ga-emere Jekọb ebere,+ họrọkwa Izrel ọzọ.+ Ọ ga-eme ka ha biri* n’ala ha.+ Ndị mbịarambịa ga-agakwurukwa ndị ezinụlọ Jekọb, ha na ha ebiri.+ 2 Ndị obodo dị iche iche ga-edulata ha n’obodo ha. Ndị ezinụlọ Izrel ga-akpọrọkwa ha ka ha bụrụ ndị nwoke na ndị nwaanyị ga na-eje ozi+ n’ala Jehova. Ndị ha na-agbaburu ohu ga na-agbaziri ha ohu, ndị na-amanyebu ha ịrụ ọrụ ga-anọzi n’okpuru ha. 3 Mgbe Jehova ga-eme ka nsogbu unu na ihe na-egbu unu mgbu kwụsị, meekwa ka unu kwụsị ịgba ohu,+ 4 unu ga-amalite ịma eze Babịlọn njakịrị, sị: “Ehee, nke onye na-amanye ndị ọzọ ịrụ ọrụ agwụla. Mmegbu alaala.+ 5 Jehova agbajiela mkpara ndị ajọ omume,Ya bụ, mkpara ndị na-achị achị.+ 6 O bibiela onye na-eji ezigbo iwe eti ndị dị iche iche ihe n’akwụsịghị akwụsị,+Onye ji iwe na-echi mba dị iche iche ọnụ n’ala n’eleghị anya n’azụ.+ 7 Ugbu a, ụwa niile ezurula ike, daakwa jụụ. Ndị mmadụ na-etikwa mkpu ọṅụ.+ 8 Osisi junipa na osisi sida ndị dị na LebanọnSodị na-aṅụrị ọṅụ n’ihi ihe mere gị. Ha na-asị, ‘Kemgbe ị dara,O nweghị onye na-egbutu osisi nke na-abịa egbutu anyị.’ 9 Mgbe e liri gị, ili* mara jijijiMgbe ọ hụrụ gị. Ọ bụ gị mere o ji kpọtee ndị nwụrụ anwụ,Ya bụ, ndị niile ji aka ike chịa ụwa.* O mekwara ka ndị eze niile na-achị mba dị iche iche bilie n’ocheeze ha. 10 Ha niile malitere ịsị gị,‘Ike ọ̀ gwụla gị otú ọ gwụrụ anyị? Ị̀ dịzi ka anyị? 11 Nganga gị ebiela. A naghịzi anụ ụda ụbọ akwara gị.*+ A gbasaala ikpuru n’okpuru gị ka i dinara n’elu ya. Ikpuru ekpuchiekwala gị.’ 12 Nwa chi ọbụbọ, onye na-enwu ka kpakpando,Ị̀ hụla ka i si si n’eluigwe daa? Onye meriri mba niile,Ị̀ hụla ka i si daruo ala?+ 13 I kwuru n’obi gị, sị: ‘M ga-agbago n’eluigwe.+ M ga-ebuli ocheeze m ka ọ dị elu karịa kpakpando Chineke.+ M ga-anọdụ ala n’ugwu nzukọ,N’ime ime ebe ugwu.+ 14 M ga-agafe ígwé ojii, gbagoo n’eluigwe. M ga-eme onwe m ka m yie Onye Kacha Elu.’ 15 Ma, a ga-achụba gị n’ili,*Chụba gị n’ebe kacha mie emie n’ili. 16 Ndị na-ahụ gị ga-ekporopụ anya na-ele gị. Ha ga-eleru gị anya ma sị,‘Ọ̀ bụ onye a bụ onye ahụ nọ na-eme ka ụwa maa jijiji,Onye nọkwa na-emenye alaeze dị iche iche ụjọ?+ 17 Ọ̀ bụ ya bụ onye mere ka ụwa niile dị ka ala ịkpa,Meriekwa obodo ndị dị na ya,+Onye na-anaghịkwa ekwe ahapụ ndị o ji eji ka ha laa?’+ 18 A kwanyeere ndị eze niile ọzọ chịrị mba dị iche iche ùgwùMgbe a na-eli ha. N’eziokwu, a kwanyeere onye nke ọ bụla n’ime ha ùgwù. 19 Ma, e lighị gịnwa eli. A tụfuru gị ka ome* na-abaghị uru. Ndị e ji mma agha magbuo, ndị a tụbara n’olulu bụ́ okwute okwuteKpuchiri gị ka ákwà. Ị dị ka ozu a na-azọ ụkwụ. 20 E liri ndị eze ndị ahụ eli, ma, a gaghị eli gịnwa eli,N’ihi na i bibiri ala gị,Gbuokwa ndị nke gị. O nweghị mgbe ọzọ a ga-echeta aha ụmụ ndị na-eme ihe ọjọọ. 21 Rụọnụ ebe a ga-anọ gbuo ụmụ yaMaka ihe ọjọọ ndị nna nna ha mere. Igbu ha ga-eme ka ha ghara ibili weghara ụwa,Ebe niile n’ụwa abụrụzie obodo ha.” 22 Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị: “M ga-emesi ha ike.”+ Jehova kwukwara, sị: “M ga-ehichapụ aha Babịlọn, bibiekwa ndị ya fọrọnụ, ma ụmụ ha ma ụmụ ụmụ ha.”+ 23 Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, sị: “M ga-eme ka ọ bụrụ ebe ebi ogwu ga-ebi, meekwa ka ọ bụrụ ọdọ mmiri ahịhịa juru. M ga-ebibikwa ya kpamkpam.”*+ 24 Jehova nke ụsụụ ndị agha ṅụrụ iyi, sị: “Ọ bụ ihe m zubere ga-eme. Ọ bụkwa ihe m kpebiri ga-eme. 25 M ga-ebibi onye Asiria nọ n’ala m,Zọpịakwa ya n’ugwu m.+ M ga-ewepụ yok ọ nyawara ndị m,Butuokwa ibu o bukwasịrị n’ubu ha.”+ 26 Ihe a ka e kpebiri ime ụwa niile. Ihe a bụkwa aka a gbatịrị iji mee mba niile ihe. 27 Jehova nke ụsụụ ndị agha ekpebiela ihe ọ ga-eme,Ònye ga-emeli ka ọ ghara inwe isi?+ Ọ gbatịakwala aka ya. Ònyekwa ga-emeli ka o weghachi ya?+ 28 N’afọ Eze Ehaz nwụrụ,+ Chineke kwuru ihe a: 29 “Ndị Filistia, ka onye ọ bụla n’ime unu ghara ịṅụrị ọṅụN’agbanyeghị na a gbajiela mkpara onye na-apịa unu ihe. Agwọ ọjọọ ga-esi na mgbọrọgwụ agwọ pụta,+Ụmụ ya ga-abụkwa agwọ na-acha ọkụ ọkụ nke na-efe efe.* 30 Ụmụ ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha ga-eriju afọ. Ndị ogbenye ga-edinakwa ala, obi eruo ha ala,Ma, m ga-eji ụnwụ gbuo ndị gị. A ga-egbukwa ndị gị fọrọnụ.+ 31 Ọnụ ụzọ ámá, besie ákwá ike. Obodo, beekwa ákwá. Ndị Filistia, obi ga-awụnye unu niile n’afọ. N’ihi na ndị agha si n’ebe ugwu na-abịa ka anwụrụ ọkụ. E nweghịkwa onye ọ bụla n’ime ha na-aga nọrọ iche.” 32 Gịnị ka ha ga-agwa ndị ozi mba ahụ zitere? Ha ga-agwa ha na Jehova atọọla ntọala Zayọn,+Nakwa na ndị ya ọ na-enweghị ka ọ hà ha ga-agbaba n’ime ya.
^ Ma ọ bụ “zuru ike.”
^ Na Hibru, “ndị dị ka mkpi chịrị ụwa.”
^ Ma ọ bụ “Nganga gị na ụda ụbọ akwara gị dịzi n’ili.”
^ Na Hibru, “M ga-ejikwa ázị́zà e ji ala ihe n’iyi zaa ya.”
^ Ma ọ bụ “agwọ ọjọọ nke na-efe ọsọ.”